Bilingual Bible English / Malagasy: I Samuel chapter 14 (King James Version (1769) with Strongs Numbers and Morphology & Malagasy Bible (1865))
Ary hoy Saoly tamin'ny olona teo aminy: Alaharo, ka izahao izay niala tamintsika. Ary nony voalahatra ny olona, dia Jonatana sy ny mpitondra ny fiadiany no tsy teo.
Dia hoy Saoly tamin'i Ahia: Ento etỳ ny fiaran'Andriamanitra (fa teo amin'ny Zanak'Isiraely ny fiaran'Andriamanitra fahizany).
Ary ny olona rehetra amin'ny tany dia niditra ny ala; ary nisy tantely teny ambonin'ny tany.
Ary Kisy no rain'i Saoly; ary Nera, rain'i Abnera, dia zanak'i Abiela.